Featured Posts | Myanmar Muslims' Voice (MMV) | Page 2
ဗွီအိုအေသတင်း – မြန်မာလူ့အခွင့်အရေး အကဲစမ်းမှုတွေ အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Yanghee Lee တင်ပြ
March 15, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, ပြည်တွင်းသတင်း
ကုလသမဂ္ဂ (United Nations) လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီရဲ့ (၃၁) ကြိမ်မြောက် ညီလာခံအတွင်း ကုလသမဂ္ဂ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Ms. Yanghee Lee က မြန်မာနိုင်ငံမှာ လွတ်တော် အပါအ၀င် အုပ်ချုပ်ရေးယန္တရားတွေမှာ စစ်တပ်က ပါဝင်နေတာ၊ တရားဥပဒေပိုင်းဆိုင်ရာတွေမှာ ပြုပြင် ပြောင်းလဲမှု လိုအပ်နေသေးတာ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းက အခြေအနေတွေနဲ့ တိုင်းရင်းသားဒေသ တချို့မှာ တိုက်ပွဲတွေ ဆက်ဖြစ်နေသေးတာကြောင့် ဒုက္ခသည်တွေ တိုးများလာနေတာ စတဲ့အချက်တွေကို မီးမောင်းထိုး တင်ပြသွားပါတယ်။ လူ့အခွင့်အရေး အထူးကိုယ်စားလှယ် Yanghee Lee ရဲ့ အနာဂတ်အရေးနဲ့ ပတ်သက်လို့လည်း ဒီညီလာခံအတွင်း လူ့အခွင့်အရေးကောင်စီက ဆုံးဖြတ်ချက် ချဖို့ရှိနေပါတယ်။ ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ (Switzerland) ဂျနီဗာမြို့ (Geneva) မှာ ကျင်းပနေတဲ့ လူ့အခွင့်အရေး
ဒုသမ္မတ ဦးထင်ကျော်၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်း ထုတ်ပြန်
March 13, 2016 Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံရေးသတင်း
ဒုတိယသမ္မတအဖြစ် ရွေးချယ်ခံရတဲ့ ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင်ဒေးရှင်းမှ အလုပ်အမှုဆောင်အဖွဲ့ဝင် ဦးထင်ကျော်၏ ကိုယ်ရေးအတ္ထုပ္ပတ္တိ အမှန်ကို ပြည်သူများသိစေရန် ဒေါ်ခင်ကြည်ဖောင် ဒေးရှင်းက ထုတ်ပြန်လိုက်ပါတယ်။ – ကွမ်းခြံကုန်းမြို့ သား အမျိုးသားဂန္ထ၀င်စာရေးဆရာကြီး မင်းသုဝဏ် (၁၉၉၀ ရွေးကောက်ပွဲတွင် NLD ရွေးကောက်ခံကိုယ်စားလှယ်၊ ကမာရွတ်မြို့ နယ်) နှင့် ဒေါ်ကြည်ကြည်တို့၏ ဒုတိယမြောက် သားဖြစ်သည်။ – အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်ခေါင်းဆောင်တစ်ဦးဖြစ်သူ ဦးလွင်၏ သမက်ဖြစ်သည်။ – “ဒလဘန်း”အမည်ဖြင့် သူ၏ဖခင် စာရေးဆရာမင်းသုဝဏ်အကြောင်း ရေးသည့် “ အဘဘ၀ အဘအကြောင်း တစေ့တစောင်း” စာအုပ်မှာ ဦးထင်ကျော်၏ ထင်ရှားသည့်လက်ရာဖြစ်သည်။ – ၁၉၄၆ ခုနှစ်၊ ဇူလိုင်လ ၂၀ ရက်နေ့တွင် မွေးဖွားခဲ့သည်။
The 5th Extraordinary OIC Summit on Palestine & Al-Quds Al-Sharif in Jakarta
March 7, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်, နိုင်ငံတကာသတင်း
The Government of the Republic of Indonesia will be hosting the5th Extraordinary Organization of Islamic Cooperation (OIC) Summit on Palestine and Al-Quds Al-Sharif in Jakarta on7March 2016, in response to the request of H.E. Mahmoud Abbas, President of the State of Palestine. The Summit will be preceded by Senior
Palestinian President Calls for the Enforcement of International Law
March 7, 2016 ENGLISH, Featured Posts, နိုင်ငံတကာသတင်း
Jakarta, 7/3 (OIC-ES2016) – Palestinian President Mahmoud Abbas called for the enforcement of international law in facing Israel aggression against Al-Quds Al-Sharif in Jerusalem. Mahmoud Abbas also reiterated that for more than five decades Israel has been damaging Islamic and Christian holy sites in Al Quds Al Sharif. “The Israeli government did
Richard Falk: An Open Letter to Ban Ki-moon
February 28, 2016 ENGLISH, Featured Posts, ဆောင်းပါးနှင့်အာဘော်
TRANSCEND Media Service Dear Mr. Ban Ki-moon, Secretary General of the United Nations: Having read of the vicious attacks on you for venturing some moderate, incontestable criticisms of Israel’s behavior, I understand well the discomfort you clearly feel. Not since the Richard Goldstone chaired the group that released the report detailing apparent Israeli